Kooxda Al-shabaab oo sheegtay in lacag madax furasho ah ku sii daayeen Silvia Romano | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Kooxda Al-shabaab oo sheegtay in lacag madax furasho ah ku sii daayeen...
Kooxda Al-shabaab oo sheegtay in lacag madax furasho ah ku sii daayeen Silvia Romano
Afhayeenka Al-Shabaab Shiikh Cali Maxamuud Raage ayaa markii ugu horreysay xaqiijiyey war aan si tooa loo shacin oo ahaa in ay Al-shabaab ku sii daayeen gabadhii Talyaaniyadda aheyd ee afduubka ah u heysteen lacag madax furasho ah.
Cali Dheer oo wareysi qadka Telefoonka ku siiyey wargeyska La Repubblica ee ka soo baxa dalka Talyaaniga waxuu ku caddeeyey iney qaateen lacagta madax furashada ah uusan sheegin cadadkeeda.
Isaga oo siihadlayey ayuu waxuu sharraxaad ka bixiyey waxey u adeegsan doonaan lacagta ay qaateen, waxuuna yiri, “Qeyb ahaan lacagta waxaa loo adeegsan doonaa in lagu soo iibiyo hub, taasoo aan u baahannahay si aan u xoojino jihaadka aanu kula jirno cadowga Islaamka, inta kale ee lacagta kasoo hartana waxaa lagu bixin doonaa iskuullada, waxaa lagu iibin doonaa cunooyin iyo dawooyin la siinayo dadkeena, waxaa lagu tababari doonaa Booliiska ilaaliya kala dambeynta iyo dhaqan-gelinta shareecada” .
Waxaa uu sheegay in dhowr iyo toban qof ay ka qeyb qaateen afduubka Silvia Romano, balse aysan agaasimin Al-Shabaab iyo mas’uuliyiinteeda, mana sheegin cida ay ahaayeen dhowr iyo tobanka qof ee fuliyey qafaalashada gabadhaan.
“Silvia waxay inoo aheyd qof aan ku gorgortono. Waxay sidoo kale ahayd haweeney, anagana haddaan nahay Al-Shabaab xushmad weyn ayaan u haynaa haweenka, waxaan sameynay wax kasta oo aan awoodno si aynan dhib u gaarsiin, sababtoo ah Silvia waxay ahayd la-hayste ee ma ahan maxbuus dagaal. Maxaabiista dagaalka waxaan ku wareejinaa ciidamadeena, si la mid ah waxa ay sameeyaan ciidamada Soomaaliya marka ay qabtaan askari Al-Shabaab ka tirsan .” ayuu yiri afhayeenka Al-Shabaab.
Mar uu ka hadlayey sida Silvia Romano u qaadatay shareecada Islaamka iyo kaalinta ay kooxdiisu ku laheyd arrintaas ayuu sheegay inaan lagu qasbin qaadashada diinta islaamka balse ay iyagu u bandhigeen ka dibna ay ku qanacday.
“Silvia Romano inta aan ka warqabo waxay dooratay Islaamka sababtoo ah waxay fahamtay qiimaha diinteena, kadib markii ay aqrisay Qur’aanka karimka ah oo ay ku qanacday” ayuu yiri afhayeenka Al-shabaab.
Dhinaca kale, Warbaahinta kooxda Al-shabaab taageerta ayaa si weyn u faaqidaysa Islaamnimada ay qaadatay gabadhan Talyaaniga ah ee u afduubneyd iyagoo sheegay in arrintan ay ka dhigan tahay iney labo gool ka dhaliyeen Taliyaaniga.